Arabia Saodita: Tafio-drivotra iray voarakitra an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2009 6:47 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Fakantsary tsotra sy fandraisana sarimihetsika eny an-tanany, nandrakitra tafio-drivotra mahery vaika niharo fasika namely an'i Riyad renivohitra ireo mpitoraka blaogy saodiana,izay tsy nahita-mitsinjo na dia metatra vitsy monja eo akaiky eo aza ary dia nitsahatra teo koa ny endri-piainana rehetra.
Ao amin'ny YouTube, i Riyadh Travels dia nametraka ity sarimihetsika ity izay maneho ny fihazakazaky ny fikisahan'ilay tafiotra ary nandrakotra an'i Riyad tao anatin'ny minitra vitsy monja.
Manamarika i Riyadh Travels:
Trangam-piainana tsy mampino ny maha-vavolombelona ny tena sady tena ao anatiny mihitsy no koa voafonon'ilay tafiotram-pasika tao anatin'ny minitra vitsy… Nazava be ny andro, manga ny lanitra… ary minitra vitsy nanaraka izay, rakotra fasika ny tontolo manodidina, nihena ny fahitana na dia metatra vitsy monja aza.
I MadridyO8 dia nametraka sarimihetsika momba io tafiotra io, mbola ao amin'ny YouTube ihany koa :
I Saudiwoman's Weblog nandefa sary maro avy amin'ny tafiotra ary nanamarika ny fahatsapany amin'ny filazana fa:
Androany, niaina ny tafiotram-pasika faran'izay ratsy izahay. Ny maraina, samy tsy nisy nanampo izany mihitsy. Nandao ny trano aho tamin'ny 7:30 ary manga ery ny lanitra, nadio. Taoriana kely tamin'iny andro iny, ndeha haka ny zanako lahy avy nanao vela-kevitra aho ary dia voatery namily fiara (na nentin'ny fiara) tao anatin'ilay tafiotra mihitsy. Naka sary vitsivitsy aho. Tena hitanao mihitsy ilay izy manatona avy any ampara-vodilanitra.Ilay làlana izay 45 mn amin'ny andavanandro dia lasa indroa noho ny mahazatra ny faharetany. Zara raha mikisaka ny fiara ary nitatatata mafy ny kipantsona fanairana. Ny fiaraben'ny mpamono afo, ny fiaran'ny mpamonjy voina syny fiaran'ny polisy dia samy nanaraka ilay tafiotra avokoa.Angamba tena andro ratsy sy nanahirana tokoa ho an'ireo olona manana aretina sohika [asthme] iny andro iny.
I Life Thru Dusty Lens izay nandefa sary momba io tafiotra io ihany koa, dia nanamarika hoe:
Haingana be tokoa ny nahatongavan'ity tafiotram-bovoka ity. Maizina ny lanitra ary nanjary niloko mavo tao anatin'ny minitra vitsy.
Boyd Jones, izay monina ao Riyadh, dia nandefa sary koa mialoha lalana ity hafatra ity. Ity ny iray amin'izy ireny :
Ny tafiotram-pasika ery ampara-vodilanitra
Majeed 99 [amin'ny teny arabo], avy ao Arabia Saodita, ihany koa dia nandefa sary navondrony avy tamina loharano samihafa, raha ny an'i John Burgess ao amin'ny Crossroads Arabia dia rohy mankany amin'ireo vaovao an-gazety momba ny tafiotra no omeny.
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny firenena iray mpifanolo-bodirindrina, Koweit, Frankom dia mitaraina fa :
Tsy nisy orana tamin'ity taona ity. Ririnina feno vovoka no mba niainanay, ny fahavaratray dia vovoka, ny lohataonanay dia vovoka ary ny fararanonay dia vovoka …saingy isaorako Andriamanitra na dia izany aza fa tsaratsara kokoa ny toerana misy antsika raha oharina amin'ny an'ny hafa.